Archive du 20180702
Lozam-pifamoivoizana tany Arivonimamo 4 no maty, 40 mahery no naratra
Taksibrosy iray « karandalina » niala teto Antananarivo hihazo an’i Manalalondo Arivonimamo no tra-doza teo amin’ny tetezan’Iombifotsy Andranomena-Arivonimamo (Pk 40) omaly alahady 1 jolay tokony ho tamin’ny 9 ora maraina.
Andry Rajoelina Maka no fon’ny any anindran-tany
Mikofokofoka mafy mitety faritra i Andry Rajoelina amin’izao fotoana miezaka maka ny fon’ny olona any, nanomboka tany Mahajanga, Mampikony, Antsohihy ary tonga hatrany Mananara Avaratra sy Maroantsetra.
Vondrona Afrikanina 80 tapitrisa dolara no fatiantoka avy amin`ny kolikoly
I Maoritania no mampiantrano ny fihaonana ara-tampon`ny Vondrona Afrikanina andiany faha-31 izay efa nanomboka ny 25 jona lasa teo.
Dama Mahaleo “Tena mety amiko io datim-pifidianana io ”
Azo lazaina ho tsara fitontona indrindra tamin’ny fotoana nanambarana ofisialy fa hilatsaka ho filoham-pirenena rehetra efa nandalo hatreto ny an’i Dama ao amin’ny tarika Mahaleo natao tetsy amin’ny tokotaniben’ny Esca Antanimena ny sabotsy teo. 2 andro taorian’ny namoahana ny datim-pifidianana ofisialy teny Mahazoarivo.
Madagasikara Afaka Tsy tokony hirotorotoana ny fifidianana
Taorian’ny nivoahan’ny daty hanatanterahana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ity taona ity dia nivoaka tamin’ny fahanginana ny vondron’ny tanora Madagasikara Afaka, tarihin’ny filohany Andrianjakatiana Johny Paul, ny sabotsy teo.
Omeko kofafa ianao e!
Salama Jean aa! Tena mahatsikaiky ahy mihitsy ianao ity rangahy marina! Ho diovinao amin’ny kofafa hoe ny inona?
Distrikan’i Fandriana Amoron’i Mania Nihetsika tany ambanivohitra ny fikambanana Mampiray
Anisan’ny miasa mafy ho an’ny fampandrosoana ny tontolo any ambanivohitra ny fikambanana Mampiray ao amin’ny distrikan’i Fandriana.
Seranan-tsambon’i Toamasina Anisan’ny atao lavanty ny Whisky iray kaontenera
Hanao lavanty ireo entana tsy nalain’ny tompony tao anatin’ny 02 volana sy tapany araka ny lalana mifehy ny fadintseranana ny ladoany eto Toamasina ny 09 hatramin’ny 11 jolay ho avy ireo.
Antoko mpihira AMAM Mitohy ny fankalazana ny faha-50 taona
Tontosa soa aman-tsara omaly tetsy amin’ny FJKM Andrainarivo fahasoavana ny ivon’ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny antoko mpihira ao an-toerana Antsan’ny Mamatonalina na AMAM.
Mondial 2018 1/8-ndalana Resy avokoa ireo andrarezina
Manao tohivakana ny faharesen’ireo ekipa andrarezina any amin’ny Mondial Russie 2018 fa taorian’ny tsy nahatafita an’i Allemagne tamin’ny dingan’ny 1/8-ndalana dia raraka teo amin’io dingana io i Argentine notarihan’i Lionnel Messi izay resin’i Frantsa 4-3 tamin’ny sabotsy 30 jona teo.
Ny eo ihany no eo e !
Nivoaka iny ny datim-pifidianana, ary samy manana ny ambarany ny mpanao politika isan-karazany.
Mpitatitra ao amin’ny UCTU Miandry ny valin-tenin’ny fanjakana
Anisan’ny vaovao nahoraka be teto an-drenivohitra, tamin’ny faran’ny herinandro teo, ny fisian’ny fitokonana hataon’ny fivondronamben’ny mpitatitra eto Antananarivo Renivohitra (UCTU), mandritra ny 72 ora.
Sekoly tsy miankina Efa miomana amin’ny fanadinana manaraka indray ny mpianatra
Efa tapitra mamarana ny fandaharam-pianarany avokoa ankehitriny ny ankamaroan’ireo sekoly tsy miankina manerana ny Nosy, iray volana mahery mialoha ny hiatrehana ny fanadinam-panjakana CEPE .
Ecole de coupe et couture Volana Namoaka ny andiany Miakanjo tsara faha-25
Namoaka ny andiany Miakanjo tsara faha-25 ny Ecole de Coupe et Couture Volana. Miisa 214 mianadahy izy ireo no navoaka ny faran’ny herinandro teo ka ny folo dia lehilahy avokoa.
Mihamahazo vahana indray ny gripa Ny hatsiaka sy ny loto no antony
Mihamahazo vahana indray ny sery sy ny gripa eto an-drenivohitra. Olona maro no lasibatra tonga manatona ireny tobim-pitsaboana maro samihafa ireny, raha ny fanadihadiana natao.
Hajan’ny Gasy ao amin’ny FIMPI-DIMY Namoaka ny andiany Hanitry ny Kanto
Tao anatin’ny lanonana famaranana ny 1 volan’ny teny Malagasy notontosaina teo Ambohidahy Ankadindramamy misy ny foiben’ny FAFI V tarihan’ny depiote Naivo Raholdina no nampitany ny hafatra hoe :
Praiminisitra Ntsay Christian Tsy azo ekena intsony ny fitsaram-bahoaka
Tany amin’ny Faritra Menabe, Belo Tsiribihina sy Morondava, ny praiminisitra Ntsay Christian nihaona sy nifanakalo hevitra tamin’ny mponina ny faran’ny herinandro teo.
Ravalomanana mivady Nanampy sy nankahery ireo niharam-boina
Tsy niandry ela fa tonga nidodododo nankahery ireo naratra sy nitondra teny fampiononana ireo nanana ny namoy ny ainy noho ny lozam-pifamoivoizana omaly tany Andranomena Arivonimamo ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana sy ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana.
Ady amin`ny ny herisetra mahazo ny ankizy Nampihetsi-po ny “Slam” teny Andohalo
Manjaka ny herisetra mahazo ny ankizy amin`ny lafiny rehetra. Nahafahana niresaka ny zava-mitranga nahazo azy ireo amin`ny fiainana andavanandro, nisy ny fifaninanana nasionaly momba izany amin`ny alalan`ny “Slam Poezia”.
Vondron’ny orinasa afaka haba AGOA Mbola marefo ny ankamaroany
Orinasa afaka haba miisa 32 no nikatona taorian’ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Olona 50 000 no very asa tamin’izany.
Fikirakirana vola anaty finday Misy ny voka-tsoa ara-toekarena entiny
Efa manomboka miroborobo hatrany ny fikirakirana vola anaty finday (monnaie banking) aty amin’ny firenena afrikanina. Efa hita mizotra mankany amin’izany tsikelikely ihany koa i Madagasikara.